ကလိုစေးထူး: သူ့အသံထွက်... ကိုယ့်အသံထွက်
Posted by ကလိုစေးထူး at 1:23 AM
Good Post,can't stop laughing.Thanks Ako Sayhtoo.
Aug 4, 2009, 2:37:00 AM
ဟုတ်တယ်ဗျ ကိုကလိုစေးထူးရ...၊ ကျနော်တို့ဆီမှာ အဲဒီလို မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ အသံထွက်တွေ အတော့်ကို များတာပဲ၊ ပီလီဟာ ပဲလဲဆိုတာ ကျနော်လည်း ဒီရောက်မှ သိရတယ်၊
ငယ်ငယ်တုန်းက နောက်ပြောနေကျ “သစ်စ အစ်စ အေ ဘုတ်ခ” (This isabook) ကိုတောင် သတိရမိ သေးတယ်၊ ကမ္ဘာဟာ ရွာကြီးတစ်ရွာ ဖြစ်လာတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ မြန်မာ့လျှာ၊ မြန်မာ့အာနဲ့ မကိုက်လို့ ကိုယ်ခေါ်နိုင်သလို ခေါ်မယ် ဆိုတာထက်စာရင် အနည်းငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အားထုတ်မှုလေးနဲ့ ကြိုးစား ခေါ်ကြည့်ရင် ပိုကောင်းမယ် ထင်တာပဲ။
Aug 4, 2009, 3:11:00 AM
မြန်မိစ်၊ ဘားမိစ် ၂ မျိုးလုံးခေါ်ခံရပါတယ်...။
သတင်းစာဆရာကြီး ဦးညိုမြနိုင်ငံခြားခရီးသွားတော့ လေယာဉ်ပေါ်ကနောက်ကျတဲ့ခရီးသည်ခေါ်တာ "ယူ နယို မရ " လို့ ခေါ်လို့ သူ့နာမည်ခေါ်မှန်းမသိတဲ့အကြောင်းငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတယ်..။
Aug 4, 2009, 3:20:00 AM
ကောင်းပါတယ် ကလွိုင်ဆေးစ်ထူးစ် ရယ် ..း)
Aug 4, 2009, 3:48:00 AM
နေရာဒေသပေါ် မှုတည်ပြီး အသံထွက်တွေ ပြောင်းပြောင်းသွားကြတယ်
အတက်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီး နားလည်ပေးရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆက်သွယ်လို့ ရသွားမှာပါ
Aug 4, 2009, 4:29:00 AM
ဟုတ်ပါ့ကိုစေးထူးရေ… နှုတ်ကျိုးနေတာတွေက ပိုပြီးပြင်ရခက်တယ်… တခါတခါ သားကို ကိုယ့်အခေါ်အဝေါ်တွေ ဘယ်လိုရှင်းပြရမှန်းတောင်မသိဘူးလေ…
ဆရာ့ စာဖတ်ရင်း တခုသတိရသွားတယ်...ကြာတော့ကြာပါပြီ
့မြန်မာအသင်း နဲ့ စင်္ကာပူ ပွဲမှာ ထိုင်ဝမ်က
ဘောလုံးပွဲ ကြေညာတဲသူက မျိုးလိူင်ဝင်း ကို မျောက်လိုင်ဝင် လို့ အော်အော်ကြေညာတာဗျ..
Myo ကို တရုပ်က မျောက်လို့ထွက်ပြန်ရော...
Aug 4, 2009, 6:19:00 AM
Thanks Ako Sayhtoo.I love the post.U really have sense of humour and yap, rite, and recall the past time we learnt in Geography"Uruguay and Paraguay "ha ha.
Aug 4, 2009, 6:36:00 AM
တော်တော်တန်ဖိုးရှိလိုက်တဲ့ပို့စ်ပဲ အကိုရေ...မြန်မာနာမည်တွေကို သူတို့မခေါ်တတ်တာတော့ ပြောမနေတော့ပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံကိုတောင် မခေါ်တတ်ကြဘူး အကိုပြောသလို ဖတ်စာအုပ်တွေထဲက အခေါ်အဝေါ်တွေကို ပြောင်းလိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်နော် သူတို့သိအောင် ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်နော်
Aug 4, 2009, 6:38:00 AM
Aug 4, 2009, 9:00:00 AM
ဥရောပတို့ အာရှတို့ကို မြန်မာလိုဆို အဲဒီလိုပဲ ခေါ်လိုက်တယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ရင်တော့ ယူရုတ်ပ် တို့ အေးရှား လို့ ပြောင်းဖတ်မိတယ်။ ဒီလိုပဲ နှုတ်တော့ ကျိုးနေပါပြီ။
ဘယ်သူမှန်မှန် မမှန်မှန် ကိုယ်ကတော့ အမှန်ကို သိရင် အမှန်ပြင်ပြောရမှာပေါ့။
အမ မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ သမီးလေးက သူ့နံမည် အင်ကြင်း ဆိုတော့ သူ့ကို သူ့အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းတွေက ခေါ်တာ engine အင်ဂျင် တဲ့။ ရီရခက် ငိုရခက်။ :)
Aug 4, 2009, 11:50:00 AM
It isadebated issue that whether we should pronounce non-English names in their native ways or in English ways.
For example: Paris vs Pari and Mexico vs Mehico as in Ko Klo Say Htoo's example.
In my opinion, when talking to native people, it is better to try to mimic their native pronouncation as much as you can in order to show your respect towards them. When talking to English/American people or other third parties, we can use the English pronouncations.
why don't u approve my comment man?
u r damm good writer
Aug 4, 2009, 3:55:00 PM
you are misspell, that is "English pronunciation" not "pronuncations". check it again .. okie?
you areadamn good writer .. huh!
Aug 4, 2009, 4:05:00 PM
ထို့ကြောင့်ပင် တစ်ကောင်တည်းသောကြက်၏ တစ်သံတည်းသော တွန်သံကိုပင် မြန်မာက ‘အောက်အီးအီး အွတ်’ ဟုကြားစဉ် အင်္ဂလိပ်က ‘ကော့က ဒူးဒယ်လ်ဒူး’ (cock-a-doodle-do)ဟု ကြား၏ ပြင်သစ်တို့ကမူ ‘ကော်ကော်ရီကို’ (cocorico) ဟုကြားကြသည်၊ တစ်ကောင်တည်းသောကြောင်က ကျနော်တို့ရှေ့တွင် ‘ညောင်’ ဟုအော်၍ ဆွစ်တို့ရှေ့တွင်မူ ‘မြဦး’ (Miaou) ဟုအော်လေသည်၊ အကယ်၍သာ တိရစ္ဆာန်များ စကားပြောတတ် ပါက ကျနော်တို့အားလုံး မှားကြသည်ဟု ပြောကောင်းပြောနိုင်ပါသည်၊ စင်စစ် အသံတစ်သံတည်းကိုထိုသို့အမျိုး မျိုးကြားကြခြင်းမှာ ကျနော်တို့ မိခင်ဘာသာစကား၏ အသံဖွဲ့စည်းပုံစနစ်များကြောင့် ဖြစ်ပါသည်၊"ဘာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး..ညီလင်းသစ်ရဲ့
ပိုစ့်အဟောင်းထဲက စာသားလေးကိုသတိယသွားမိလို့ပါ။၊ ကိုကလိုစေးထူးရဲ့ ပိုစ့်လေးကအတော်ကောင်းပါတယ်။"
Thanks for correcting my mistake. After using MS Word and MS Outlook with their spelling checkers on for quitealong time, my spelling ability has declined. :-)
Aug 5, 2009, 12:25:00 AM
တစ်ချို့တွေက မြန်မာ ကို မီရန်မာ လို့ ထွက်ကြတာ ရှိသေးတယ်။ ကျွန်မ နာမည်မှာဆိုလည်း ငြိမ်း ပါလို့ မစ္စ ငြအန်း လို့ ခေါ်ခဲ့ရဖူးသေးတယ်။ :P
စပိန်ဘာသာစကားမှာ x ကို h လို အသံထွက်တယ်။ ဒါကြောင့် မဲဟိကို ဖြစ်သွားတာပါ။eကိုလည်း အီး လို့ မထွက်ပဲ အဲ လို့ ထွက်တယ်။ ဒါကြောင့် ပီလီ လဲ ပဲလဲ ဖြစ်သွားတာ။ ဒါပေမယ့် မက်ဆီကို၊ ပီလီလို့ပဲ ပြောနေတာ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ။
ဒါတွေက လူနဲ့ ဒေသပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားတာမျိုးပါ။ tomato ကို တိုမားတိုး လို့ ခေါ်တဲ့သူရှိသလို၊ တိုမေးတိုး လို့ ခေါ်ကြသလိုပေါ့။
Aug 5, 2009, 3:09:00 AM
အသံထွက်တွေ နှုတ်ကျိုးတာတော့ မပြောပါနဲ့တော့ ကိုစေးထူးရေ။ ပြင်ပေးမယ့်သူ မရှိရင် ပိုဆိုးတာပေါ့။
ကျွန်မကတော့ ခုနက အမည်မသိ ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုယ်ကြားတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ခေါ်တာမှန်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ ကျွန်မတို့ကို တောထဲမှာ ဆေးသင်တန်းပေးတဲ့ ကရင်ဆရာတယောက်က နင်တို့ ဗမာတွေနားက သြဥလို့ ကြားတဲ့အသံကို တို့ကရင်တွေနားကတော့ တူဝူး.. လို့ပဲ ကြားတယ်လို့ ကျွန်မတို့ နယ်က လူတွေလည်း သူပြောတဲ့အတိုင်း တူဝူး လို့ပဲကြားတယ်။ နွားအော်သံကို မြန်မာအတော်များများက ဘွတ်အဲလို့ ကြားပေမယ့် ကျွန်မတို့နယ်က လူတွေက အောင်ပန်း လို့ကြားတယ်။ ကိုယ်ကြားတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ ကိုယ်ခေါ်တာကို အမှန်တွက်ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုဂျူလိုင် ပြောသလိုပဲ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် အင်္ဂလိပ်ခေါ်တဲ့အတိုင်းပြော မြန်မာလိုနဲ့ ပြောရင် မြန်မာခေါ်တဲ့အတိုင်း ပြောရလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာလူမျိုးကို မြန်မာလိုပြောရင် မြန်မာ ဒါမှမဟုတ် ဗမာပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ Burma, Burmese ပဲ ဖြစ်ရမယ်။ ဒီလိုမပြောပဲနဲ့ Myanmar သွားလုပ်တာကတော့ မှားတယ်။ ထိုနည်းအတူ ဇင်းမယ်၊ ပီကင်း၊ တူရဂီ၊ ကုလား၊ စတာတွေကို ဗမာလိုပြောရင် ဒီအတိုင်းပြောတာ မှန်တယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ Chingmai, Beginn, turkey Indian ပဲဖြစ်ရမယ်။ Zinmae, Pikin, tuyaky, Kalar လို့ သွားပြောရင် မှားတယ်လို့ သတ်မှတ်ရလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
Aug 7, 2009, 6:11:00 AM
ဟိဟိ ဒီပို့စ်ဖတ်ပီးတော့ ဆရာတစ်ယောက်ရေးတာ သတိရတယ် ဘုရင့်နောင်တို့ တယ်ညံ့တာကိုး.. သူတို့သာကိုယ့်နယ်ထက်ကျော်တိုက်ခဲ့ရင် အင်္ဂလိပ်တွေ ဗမာစကားသင်ရမှာ ခု..သူတို့စကား ဒို့ကသင်ရတယ်တဲ့ ..း)
Aug 10, 2009, 11:55:00 PM
Aug 11, 2009, 7:52:00 PM
Aug 15, 2009, 10:40:00 AM
ဟီးဟီး.. သင်ထားတာလေး အသုံးချသွားတယ်...
အစ်ကိုရေ မရောက်တာ ကြာလို့ လာလည်သွားပါတယ်...
မီးလေးတို့လည်း တချို့အသံထွက်တွေ မှားနေမှန်းတော့ သိပေမယ့် အစ်ကိုပြောမှပဲ တော်တော်မှားနေမှန်း သိတော့တယ်.... ဟီး ဟီး
Aug 23, 2009, 4:29:00 AM
အကိုပြောပြမှပဲ သိရတော့တယ် ကောင်းတယ်ဗျ
ပိုစ်အသစ်များရှိမလား လာရှာတာလဲ ပါပါတယ်..
မလေးသည် တစ်ပြည်သူဆိုတာ မေ့နေမှာစိုးလို့ ဟဲဟဲ
Sep 3, 2009, 3:41:00 AM
စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆောင်းပါးရှင်နဲ့ ထောက်ခံသူအချို့ဟာ ဘာသာဗေဒ ပြဿနာကို အလွန်အကျွံအလွယ်မှုပြုထားသလို ခံစားရတယ်။ တွင်ကျယ်နေတဲ့ အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်းတွေကို လိုက်ပြင်ပေးတာဟာ ဘာသာဗေဒမှာ ထုံထိုင်းခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ိမလားပဲ။
အရပ်စီးယား ကို အင်္ဂလိပ်က Russia လို့ ရေးပြီး ရုစကီးလူမျိုး ကို အင်္ဂလိပ်က Russian လို့ အသံထွက်တယ်။ ဒါကြောင့် ရုရှလူမျိုး ရုရှားနိုင်ငံဆိုတဲ့ မြန်မာအသံထွက်ကို မှားတယ်လို့ ပြောဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ဗလာဂျီးမီးယားပူကျင်ကို ဗလာဒီမာပူတင်လို့ ရေးလို့ မှားတယ်လို့ပြောရင် စကားကပ်ပြောတာပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
Thကို နိုင်ငံအများစုက ထ လို့ထွက်ပေမဲ့ မြန်မာက သ လို့ ထွက်ပါတယ်။ Thailand ကို သိုင်းလန်းလို့ ထွက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ ရေဒီယိုထဲမှာ ကြားကြားနေတော့ Th သ လို့ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းကိုပြင်ပြီး ထိုင်းလန်းလို့ပဲ ထွက်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထုံထိုင်းတဲ့ကျွန်တော့်လိုလူက ထိုင်းစကားပြောရင် ထိုင်းလန်းလို့ ပီပီသသကြီး ထွက်ပြလိုက်ရုံနဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေက လည်ပင်းလာဖက်မယ် မထင်ဘူး။
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ Nihon (Nipon)ကို Japan လို့ ကန်နဲ့ လိပ်တွေ ပြောတဲ့အတိုင်း ဂျပန်လို့လိုက်ရေးတဲ့ မြန်မာတွေကို တလွဲတွေပဲလို့ ပြောရင်ဖြစ်မလား။
အသုံးအနှုန်းနဲ့ ပြဿနာရှာရင် တကမ္ဘာလုံးကို ပြဿနာရှာလို့ ရနေပြီ။ ယူအက်စ်အေ (USA)ကို ရုရှားက ဆရှာ လို့ ပြောတာဟာ အပုပ်ချတာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်က မက်စ်ဘာကို Moscow လို့ရေးတာဟာ နွားနဲ့နှိုင်းပြီး နှိမ်တာပါ။
တကယ်ကတော့ မငယ်နိုင်ပြောသလိုပဲ လွဲချင်းလွဲရင် မြန်မာလို ပြောနေရက်နဲ့ ဇင်းမယ်ကို ချင်းမိုင်လို့ ပြောပြီး ဥရောပကို ယူရုပ် လုပ်တဲ့လူတွေကမှ လွဲတာခင်ဗျ။
ကျွန်တော့် အယူအဆကတော့ ဘာသာစကားကို လိုက်ပြင်နေတာထက် တွင်ကျယ်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ နောက်ကိုပဲ လိုက်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ မမှားကြပါဘူးလို့ ပြောရင်း ဘေးလွတ်အောင် ရှောင်သွားပါတယ်ဗျို့။
Sep 26, 2009, 4:01:00 AM
စင်ကာပူ ရောက်ခါစက Clerk Quay (ကလပ်ကီး) ကို ကလပ်ကွေး လို့ မှားခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ဒေသ ကိုယ့်စကားမဟုတ်တော့ အသံထွက် ဖလှယ်တာ မှားတာပါပဲ.. ကိုယ့်အချင်းချင်း ပြောတော့လည်း နားတော့လည်နေပြန်တာပါပဲ..
တရုတ်စာမှာ အသံထွက်လွဲတာက ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်.. Japan ကို ရွဲ့ပန်.. Malaysia ကို မာလိုင်ရှ .. Hindu တွေကို ယင်းတု.. Singapore ကို စင်ကျားပေါ်.. စသည် စသည်ပေါ့..
သူ့ဘာသာ၊ စာနဲ့ သူ့အသံထွက်နဲ့တော့ ဟုတ်နေတာပါပဲ..
ဆက်သွယ်ရေး အရေးကြီးလာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ နာမည်အသံထွက် မှားခေါ်လို့ မလွဲသင့်ဘဲ အထစ်အငေါ့ဖြစ်ရတာတွေကိုတော့ ရှောင်နိုင်ကြရင် အကောင်းဆုံးပေါ့ ကိုကလိုစေးထူး..
Oct 28, 2009, 8:08:00 AM
တချို့ အခေါ်တွေက မြန်မာလိုက အင်္ဂလိပ်လိုထက် ပိုနီးစပ်တယ်။ turkey ဆို သူတို့က Turkiye လို့ခေါ်တယ်။ "တူရကီရယ်" လို့ အသံထွက်ပါတယ်။ ပါရီ ဆိုလဲ မြန်မာလိုက ပိုနီးစပ်တယ်
Jul 3, 2010, 7:23:00 AM
လက်တကမ်း တိုက်ပွဲ said...
အရမ်းကောင်းတယ်ဗျို့ မထင်မှတ်ပဲ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်လိုက်ရတာ တော်တော်ကံကောင်းတယ်ဗျို့ .. ဖေ့ဘွတ်မှာ လင့်ယူသွားပြီး သွားရှဲခွင့်ပြုပါ ..
Nov 6, 2010, 11:04:00 AM
စာရေးသူရဲ့ Post ကလည်း မရပ်မနား ရယ်ရ...
စာဖက်သူများရဲ့ Comment များကိုလည်း ထပ်ဆင့်
သဘောကျရနဲ့ဗဟုသုတလည်းရ...ရသကလည်း
မြောက်နဲ့ကောင်းလွန်းတဲ့ Post လေးပါ။
...ညီမ နာမည် ခင်မာလာအောင် လဲ ဘာပြောကောင်းမလဲနော်...စလုံးလဲရောက်ရော..
ခင်မာလာအုန်း တဲ့လေ။ ဘယ်လိုမှကို ပြင်မရတော့။
တရုတ် ဖွားဖွားတွေ ခေါ်ပုံများ။ :)
Nov 19, 2010, 5:12:00 AM